Fitsangatsanganana an-tsehatra - Ding Zhou Tian Yilong Metal Products Co., Ltd.
Fomba fanamboarana tariby
Atrikasa fanaovana sary an-tariby
Atombohy amin'ny tsorakazo vy lehibe (Q195, 6.5mm), avy eo ity tsorakazo vy ity dia misintona amin'ny takelaka vy misy lavaka ao anatiny. Antsoina hoe maty ity takelaka vy ity, ary ny fizotra amin'ny famongorana ilay vy amin'ny die dia fantatra amin'ny hoe manao sary. Ity dingana ity dia averimberina hatrany hatrany ary mihena hatrany ny fahafatesany mandra-pahatongan'ny haben'ny tariby tadiavina.
Ahoana ny fomba fanefana tariby
Manamboatra tariby tadiavina nalaina tamin'ny alàlan'ny bata zinc. Nataontsika mpisolo toerana ny solika hatramin'ny 2014, izay manadio ny tontolo iainantsika noho ny teo aloha. Ny tahan'ny zinc dia azo fehezin'ny milina, mba hahafahanao mahazo ny tahan'ny zinc tianao.
Ahoana ny fanenomana harato / harato tariby
Ho an'ny tariby akoho / hexagonal tariby, hivezivezy miaraka ny tariby nandrisika mba hanokafana hexagonal.
Ho an'ny harato tariby, ny tariby dia hikambana miaraka amin'ny lavaka toradroa.
Manomboka amin'ny horonan-taratasy lehibe ka hatramin'ny horonana kely
Mba hitsimbinana toerana, ny vokatra vita dia hatao ratra mafy amin'ny alàlan'ny milina manokana, ahafahan'ny horonan-taratasy maro mifampiditra amin'ny paleta. Ny hakitroky avo kokoa isaky ny tongotra toratelo dia mamela ny sombin-javatra bebe kokoa ho entina ao anaty kaontenera iray, manapaka ny vidin'ny fandefasana isaky ny tapa.
Ny mpiasa dia hanangona ny harato miharitry ny ratra.
Pallet hazo / Pallet vy / boaty baoritra / boaty hazo lehibe…
Fanenomana, fanenomana ary famonosana harato
Miaraka amina karazana tariby akoho amam-borona maro karazana izahay, lasitike vita amin'ny lasopy sy voatenona ao anaty galvanized Alohan'ny fanenomana / Weld (GBW), Galvanized After Weaving / Weld (GAW), PVC Coated ary Stainless Steel. Zavamaniry isan-karazany, harato Aviary ary harato, Fefy alika dia azo omena ihany koa.
Izahay dia mitazona magazay be dia be ary afaka manafatra entana manokana avy amin'ny orinasa hafa izahay. Amin'ny fifikirana amin'ny fitsipiky ny "kalitao tsara indrindra, fandefasana haingana, serivisy haingana", dia nahazo laza tsara tany ampitan-dranomasina, anisan'izany i Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana, afovoany atsinanana, Amerika avaratra, sns.
Mamporisika ny fampitahana ny kalitaon'ny vokatra sy ny vidiny izahay. Ny mpanamboatra ny materail dia mpamatsy matihanina ary manana fifehezana kalitao henjana izy ireo. Mampirehareha ny mpiasa voaofana izay tototry ny filana, ny entana azo ekena ary ny serivisy akaiky anay izahay.